Sonke siyazi ukuthi inombolo kamazisi - lokhu nto yanoma yiluphi uhlobo, ngaphandle lapho isakhamuzi ongakwazi ukuzenza. Kulokhu, akunandaba ukuthi bangobani: umuntu qobo noma usomabhizinisi ngabanye - lekhodi liyadingeka wayenakho konke. Lokhu kunikeza sihloko 84-th we Tax Code (ikakhulukazi, isigaba lwesikhombisa kwalesi sihloko).
Manje ake sixoxe inqubo yokubhalisa. Okokuqala, ukuze uthole inombolo yokulandelela, udinga balungise amaphepha. Kunalokho, into eyodwa vo: passport we isakhamuzi Russian Federation. Kodwa ngaphezu yokuqala, ubocaphela kutsi amakhophi amakhasi athize (2nd, 3rd futhi lesi-5). Nakanjani kudingeka ukubhala ifomu yakhe siqu isicelo. Kungenjalo, wena umane ugcwalise ifomu ephrintwa ngaphambili. Eqinisweni, kulesi sigaba sokuqala inqubo yokubhalisa usuphothuliwe. It uhlala kuphela ukuvela ehhovisi lentela kanye uthumele le mibhalo ukuze izinsuku 5 (noma ngaphambili) ukuze beze uthole ikhodi ukuhlonza ngomumo.
Kukhona esinye isici zokwamukelwa engasekelwa laziwe kubo bonke. Ngemva ukwabela izinombolo singasetshenziswa ukwethula kuyo ipasipoti zomsebenzi. Ngenxa yale njongo, ehhovisi lentela (endaweni sokubhalisa) liyadingeka amadokhumenti ezimbili: Inombolo ye-VAT kanye ipasipoti we yisakhamuzi yeRussia. Ulwazi olufakiwe mhla ziyi-18 sekhasi lokugcina. Kungani na? Okokuqala, kulula kakhulu. Njengoba yaziwa, inombolo kamazisi kuyadingeka yonke indawo: futhi sekukhokhwe loan ebhange, futhi lapho ufuna umsebenzi. Ukuze lithwale azungeze nawe isitifiketi, ungavele ufaka izinombolo nambili engcwele main idokhumenti isakhamuzi. Lapha kubalulekile ukuba bathi: efanayo uphawu umthetho yasekhaya nesibalo ngibopha asisebenzi. Naphezu kweqiniso lokuthi ke kuvunyelwe, akufanele uyenze eyakho wakhe. Yebo, noma imuphi nokungena khona ngokungemthetho noma uphawu ngokuzenzekelayo kwenza ipasipoti ayivumelekile.
Manje ake sixoxe indlela ukuze uthole kokulandela ikhodi usomabhizinisi ngamunye (SP). Lapha anakho ezimbili izinketho. Okokuqala - uthole inombolo lwesabelo parallel isimo IP. Esesibili - nganoma yisiphi isikhathi, kodwa kuze kube ngomzuzu ingakamiswa eyenziwa sokubhaliswa njengomsebenzi FE. Ngemva kwalokho lo INN okuholela edingekayo ukuze ukhombise ekuphetheni yiziphi izivumelwano. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi ibekwe ukuphrinta. Ngaphandle, yebo, usomabhizinisi ngokuvamile etholakalayo.
Kufanele wakhumbula ukuthi uthola i-inombolo kamazisi Izakhamizi azidingeki: le nqubo esokuba yokuzithandela. Ngakho-ke, uma ngokungazelelwe uthola ukuthi inombolo oyinikezwe ngaphandle isizathu (futhi ngaphandle ubhala isicelo okuhambisanayo), kungenzeka ukuba ziwushiye. Ngu kwakhiwa izitatimende futhi. Kodwa ukuze senqabe ukwamukela. Inqubo efanayo Kwenziwa bayizakhamuzi unekhodi akukwazi ngenxa yezinkolelo zenkolo. Kube kufanele amacala futhi ubukuphi abantu bayenqaba ukwamukela izinombolo. Njengoba kulindelekile, imiphumela engemihle ngokomthetho kubo kwakungasho lutho lokho.
Indlela yokwenza maple sobuhlalo?
Indlela yokutshala umkhiwane ekhaya?